DULQAADKU WAA U WAXTAR & BISEYL UMADDA-W/Q Cabdiwelli Wadani » GPAN
DULQAADKU WAA U WAXTAR & BISEYL UMADDA-W/Q Cabdiwelli Wadani
DULQAADKU WAA U WAXTAR & BISEYL UMADDA!
Tallaabo kasta oo ay qaadeen waxay ka hortimid shuruucda dalka, maslaxada umadda, midnimiada iyo xasiloonida siyaasadeed ee waqtiga iyo naftuba ku baxayaan habeen igo maalin.
Intaas oo dhan waxay ugu dhaceen inay dadka ku sii xukumaan sicoogin aan sharci aheyn, afduubid iyo qabqableyn sharciyad loo baadigoobayo (Semi-Legitimate warlodism).
Waxay aheyd Maalmo ka hor markii ay si kastaba ha u dhacdee afkooda furteen oo si mas’uuliyaddu ka maqan tahay warbaahinta uga hadleen Madaxda Maamul Goboleedyadu.
1-Waxay ku baaqeen xasillooni darro, colaado la abaabulo iyo dagaallo ka dhaca dalka ilaa qaarkood si aan qarsoodi laheyn warbaahinta kaga hanjabeen inay xamar nabadda ka qaadayaan, goboladay joogaan warkoodaba daa, oo durba dagaallo ayey ka bilaabeen.
Isma ogeyn in lagu xisaabtami doono hadaladaas. Mana oga in ay muuqato in markay ku laabteen deegaamadii ay ka talinayeen marka beelo nabad u yaal colaad geliyeen oo dad noolaa saacad ka hor tegistooda xabaalahoodii la galbiyey, iyagoo jooga. Waa faldambiyeed loo bareeray laguna sii dhawaaqay in la gelayo.
Wa dambi qaranka laga galay, oo mas’uliyiin dku ka sugayey inay nabad ku soo celiyaan si ku talagala ah u galeen. Waxaa yaal iyagoo codad & muuqaal leh ah.
2-Waxay si aan ka fiirsi laheyn u sheegeen inay dowladda Federalka xiriirka u jareen.
La shaqeyn mayno dowladda dalku leeyahay Waxay la micno tahay wa kala goynay Soomaaliya. Waa khiyaano Qaran. Waxay taal iyadoo cod muuqaal iyo qoraal ba leh.
Waa dambi qaranka laga galay una bahan in wax la iska weydiiyo.
3- waxay dalbadeen faragelin shisheeye iyo in siyaasadda iyo arrimaha gudaha dalka ay ka taliyaan dowlado kale.
Waxay toos u weerareen madaxbannaanida dalka oo ah waajibka ugu weyn oo qofka Soomaaliyeed saaran ilaalintiisa. Weli waxay baadi goob ugu jiraan kuwii dalka kala qeyb qeybiyey oo beel beel noo qeybiyey oo ay u adeegayeen waqti dheer ilaa ay ku dumiyeen qaranimadii, midnimadii iyo madaxbannaanidii dalka oo hadda si dirqi ah dib ugu soo noqotay.
Waa dambi qaran oo aysan ka fiirsan ama ababidii khalaneyd ka indha saabtay, ilaa ay moodeen in nolosha siyaasadda iyo dowladnimadu tahay in shisheeyihii adeegsaday ay tahay mid la isaga tiirsanaan karo iyadoo shuruucda dalka lagu tumanayo.
4-Waxay saldhigyo ciidan, dekedo iyo adeegyo qaran oo dhammaan taabanaya madaxbannaanida iyo nolosha umadda siiyeen ama u gacan geliyeen shisheeye iyagoon ixtiraamin dareenka dadkooda, madaxbanaanida iyo dastuurka dalka midna.
Waa Dambi Qaran oo ay tahay in si sax ah wax la isaga weydiiyo laguna xisaabtamo. Waliiba tan danbe waxay ku qaateen lacago oo waxay u ekeyd inay gadeen goobahaas oo dhan.
5-Waxay si kutalagal ah u hor istaageen dhismaha Ciidan Qaran oo dalka difaaca iyagoo ka shidaal qaadanay kuwii ay u adeegayeen. Baddelkeeda waxay la bareereen inay dhisanayaan Daraawiish. Waxaa cad in dantu tahay in lagaga hortago qaranimada iyo dhismaha ciidanka Qaranka.
Waa dambi qaran oo aan ogaan doonno meesha loo socdaa inay tahay in dowladnimada lagaga hor yimaado.
6- Waxay dheheen shir qaran oo aan dowlad iyo gole Baarlamaan ku dhisayno ayan dhuusamareeb ku qabaneynaa.
Waxay la micno tahay dalku dowlad malaha inay dheheen. Waa dambi qaran oo u baahan in laga xisaabtamo.
6- Waxaa marar badan diideen inay xisaab celin ka soo sameeyaan dhaqaalaha loogu dhiibay inay dadka ay maamulaan wax ugu qabtaan ama mushahar u siiyaan iidamada iyo dadka ku mashquulsan adeegga qaranka
Ina ciddii loogu dhiibtay iyo wixii loo diray u isticmaalaan dhaafe xitaa dalka ma gekine meelo kale ayaa hanti loova sameystay iyadoo la hayo raadad cadcad.
Wa dambi qaran ka laga galay.
7-Waxay sameeyeen qoraal ay kaga dalbanaaan dunida inaan Soomaaiya deynta laga dhaafin, bal yaa garan kara dantay ka lahaayeen?
Ma filayo in dan kale laga lahaa oo aan ka aheyn yaa Soomaaliya dhibaaada ka bixin.
8- Waxay waqti badan geliyeen inay hay’adaha dowladd dhexe iska horkeenaan, iyagoo adeegsanaya Mas’uuliyiin garaadkoodu qabiil noqday. Waxaan hayna caddeymo.
Waxaa aniga oo Xildhibaan ah ila soo xiriiray mid ka mid ah iyo saaxiibbo mid kale iyagoo waqti gelinayey inaan madaxda kahor imaanno si khalkhal siyaasadeed loo galo. Waa hubaain dad qaatay jiraan, kuna shaqeeyey haa ku fashilmeene.
Waxaa haynaa caddeymo ay ku jiraan codad iyo doodo.
Waa hubaa hadday Xeer-ilaalinta Qaranku tallaabo qaaddo inay xabsi ku wada gelayaan dambiyadaan iyo kuwo kale oo ka waaweyn.
Iyagoo intaas oo dhib ah qaranka u geystay ayuu madaweynuhu yahay waayeel ummad burburtay maamulaya oo xisaabtankii dowliga ahaa ka hor mariyey hadba inuu u yeero oo bal inuu wa kasta ku dayo bal in garashadu u soo noqoto.
Madaxweynaha biseyl Siyaasadeed iyo Hogaamin Miisaaman ayaa iiga muuqata, laakiin waxay ku dhamaaneysaa inaysan wax ku qaadan, dadka Soomaaliyeedna arkaan sidey u fekerayaan nimankaani oo fahmaan. Waxayna cimri gaabni ku rudeysaa mustaqbalkooda siyaasadeed oo hadaba cimri dulleysan maraya.
Tani waa martiqaad ka soo baxay Madaweynaha Jamhuriyadda Federalka Soomaaliya. Bal aan aragno waxa warkoodu noqdo!.
Waxaa qoray Xildhibaan Faarax Cabdi Xasan oo katirsan Baarlamaanka Jamhuriyadda federaalka Soomaaliyeed..
W/Q Abdiwelli Suluble ( Waddani)
Previous AFRICA BEFORE SLAVERY
Next An Open Letter To The President Of Somalia On How To Solve Youth Unemployment